I-Logic Robotic e-Fuzzy -iGeofumadas
Ikhaya/Zobunjineli/Ingqondo yeRobotic yeLogic
Ukusuka kuyilo lweCAD ukulawula ngesoftware enye
Ingqondo yeRobotic yeLogic ibhengeza ingxelo yenguqulo yokuqala ye Isitudiyo esinobuzaza™ kumboniso weHannover Messe Industry 2021 oya kuphawula ukujika kwimveliso yerobhothi eguqukayo.
Ngokurhuqa kwaye ulahle iinxalenye ze-CAD kwiwele lakho ledijithali ye-3D, iindlela ezintsonkothileyo zenziwe ngokuzenzekelayo kwaye zithunyelwe kwirobhothi yemveliso ngonqakrazo olunye. Konke ngeqonga lesoftware.
➔ Ukusuka kwi-simulation engaxhunywanga kwi-real-time control, isoftware Isitudiyo esinobuzaza™ isusa umsantsa phakathi kokulinganisa kunye nenyani ukunciphisa ixesha lokuphumla kunye nokwenza ngcono ukuhamba kweerobhothi.
➔ Yenziwe ngobunjineli ukusuka emhlabeni ukuya kuthi ga ekunciphiseni okukhulu isidingo sobuchwephesha berobhothi ngenxa yekhowudi ye-twin ye-elektroniki engenasimahla.
Can Ungatshintsha phakathi kwayo nayiphi na indlela yokwenza iirobhothi kunye nemodeli ngokucofa kabini ukufumana ukhetho olufanelekileyo lwesicelo sakho, ngaphandle kwesidingo sokutshintsha isoftware okanye ukuphinda imisebenzi yoyilo echitha ixesha.
➔ Ilawula nezona zixhobo zinzima kakhulu zerobhothi kwaye iyafikeleleka kwiinkampani zabo bonke ubukhulu.
Ubunzima ukuza kuthi ga ngoku
Zombini ezi mveliso kunye neerobhothi zokusebenzisana zibiza kakhulu ukufezekisa imveliso eguqukayo ngokwenyani ngenxa yobunzima besoftware kunye nokudityaniswa. Okwangoku zizicelo ezimbalwa zokuphatha, ezinje ngokukhetha kunye nendawo, ezinokufikeleleka ngokwenyani kwabo bangezizo iingcali kwaye ngenxa yoko zibiza iindleko kwimveliso eguqukayo.
Nangona kunjalo, uninzi lweerobhothi kunye nokusetyenziswa kweecobotic zifuna izixhobo ezintsonkothileyo kunye nesoftware, kunye neengcali zebrendi. Ezi zixhobo zifuna uqeqesho olubalulekileyo kunye namava.
Isiphumo kukuba ngaphezulu kwe-75% yexabiso elipheleleyo lobunini (TCO) inxulumene noqeqesho kunye neenkonzo zesoftware kwimveliso esemgangathweni esemgangathweni. Kwimveliso eguquguqukayo eli nani linokuphakama ngaphezulu kwe-90% ye-TCO kwaye ngenxa yoko litshabalalise imbuyekezo enokubakho kutyalo-mali kwinkqubo yeerobhothi.
Isisombululo: iqonga elinomdla kuwo onke amanyathelo
Isitudiyo esinobuzaza™ liqonga lesoftware elinendalo yonke nelinciphisa iindleko zenkqubo yeerobhothi ngesinye kwishumi. Nge-Fuzzy Studio ™ nayiphi na ifektri enokuthi isebenze ngokuzenzekelayo, ngokulula nangeendleko ezifanelekileyo, nokuba kungasebenza izinto ezintsonkothileyo, ukuhambisa kunye nokudibanisa iintsimbi.
Inomdla kwaye ilula njengomdlalo wevidiyo
Ujongano oluqhelekileyo lwazo zonke iintlobo zeerobhothi
Ukuchaneka kwenqanaba loshishino kunye nokusebenza kolawulo lweerobhothi lwangempela
IFuzzy Studio ™ igubungela onke amabakala obomi beeseli zerobhothi, ukusuka kulungiselelo lweprojekthi, uyilo kunye nokuyalela kulawulo lwexesha lokwenyani, ukuhlengahlengiswa kwakhona kwi-Intanethi kunye nokugcinwa.
Yenzelwe ukukhawulezisa ukwamkelwa kunye nokusetyenziswa kweerobhothi ngabo bonke abachaphazelekayo, ukusuka kubavelisi abakhulu ukuya kumashishini amancinci naphakathi, abahlanganisi beenkqubo kunye nabenzi beerobhothi ze-OEM.
Khetha iirobhothi kwilayibrari ebanzi
Bhrawuza ingqokelela epheleleyo yeemodeli zeerobhothi ezivela kwiimveliso ezixhasiweyo kunye nefilitha ngeempawu.
Ngenisa iifayile ze-CAD kunye ne-3D ngokulula
Ngokukhawuleza yenza i-robotic system ngokunyaniseka okuphezulu kokusebenzisana kwe-3D kunye nezinto ze-CAD. Iifomathi ezixhasiweyo: ngaphezulu kweefomathi ezingama-40 kubandakanya inyathelo le-CAD STEP kunye ne-IGES.
Fumana isiXhobo sokuPhela kwesiXhobo sokunene
Khetha kwizinto ezininzi ezikhethiweyo zesixhobo somenzi okanye ungenise izixhobo zesiko. Zonke izixhobo ezixhaswayo ziiplagi kwaye zidlala ngokuhambelana.
Yenza kwaye uhlengahlengise iindlela zendlela ngokubonakalayo
Akukho migca ididayo yekhowudi okanye iinkqubo zokudibanisa. Yakha ngokubonakalayo iindlela zendlela. Guqula iitrailer ngexesha lokwenyani kwaye ubone utshintsho kwi-3D.
Ukuveliswa okuzenzekelayo kwendlela yokutsala kunye nokuwisa
Tsala kwaye ulahle izinto ze-3D CAD kuyilo kunye nobuchwephesha obunini bezinto ziya kuthi ngokuzenzekelayo zenze iindlela zokuphepha ukungqubana, ukugcina ixesha, ukwandisa ukusebenza kunye nokwenza ukhuseleko. Iiyure zorhwebo lomsebenzi obukhali ngonqakrazo olulula olumbalwa.
Yenza inkqubo epheleleyo ngaphandle kwekhowudi
Hlela izixhobo zendlela, izixhobo, iisenzi kunye nokuvumelanisa i-I / O. Akukho sidingo sokubhala ikhowudi.
Tshintshela iirobhothi kwaye uqhubeke usebenza
Ngombulelo kwii-algorithms zobunini, abasebenzisi banokutshintsha phakathi kweerobhothi ngokucofa kabini kuyilo ukuze bafumane olungele umsebenzi wabo. Zonke iindlela zokuhamba kunye neenkqubo zibalwa ngokuzenzekelayo kwaye ukungahambelani kunokulungiswa ngokulula.
Unqakraza kanye ukufaka
Gracias a algoritmos de control determinísticos en tiempo real “lo que se ve en la simulación es lo que se obtiene en la realidad”. Se puede instalar una aplicación completa con un clic en el robot de producción y salvar la distancia entre simulación y realidad. Se siguen y ajustan los procesos directamente y en tiempo real.
Malunga neLogotics yeLogic eFuzzy
Ingqondo yeRobotic yeLogic Ikhule kumaziko ophando eerobhothi aseFrance kwaye yasekwa liqela laseFrance naseMelika leengcali zeerobhothi ezibone indlela entsha yokulawula kunye nokwenza inkqubo kwisizukulwana esilandelayo sezicelo zerobhothi. Enkosi kumthengi omdala kumzi mveliso wee-audiovisual, abasunguli benze isisombululo esitsha ngokupheleleyo ukuze abasebenzisi abangenamava bakwazi ukunxibelelana, balawule kunye nenkqubo yeerobhothi zeshishini kwizicelo ezintsonkothileyo ezenziwa nayiphi na irobhothi. Amava abo abavumela ukuba batshintshele kolu shishino.
Ukusuka eGeofumadas sonwabile ukukuzisa zonke iindaba ezinxulumene nomhlaba wegeo. Kule meko, i-Fuzzy Logic Robotics ibonisa isisombululo esiza kuqhuba iinkqubo zolawulo lwedatha ye-CAD kulawulo lwexesha lokwenene kwiirobhothi. Oku ngokungathandabuzekiyo kusisondeza kwinto esiyifunayo kuguqulelo lweshishini lesi-4, apho iinkqubo zizenzekelayo kwaye nezixhobo eziyimfuneko zenzelwa ulawulo lwexesha elingcono. Umsebenzi weFuzzy Studio kukuququzelela inguquko elandelayo kwi-robotic automation ngokusombulula imiceli mngeni kunye nokuguqula indlela abantu abanxibelelana ngayo nabasebenzisa iirobhothi. Siyakumema ukuba utyelele iwebhusayithi yeFuzzy Logic Robotic ukuze ufumane ulwazi oluthe vetshe ryan@flr.io anthony.owen@flr.io. Siza kuyazi into yokuvela kwesi sisombululo ukukunika zonke iinkcukacha kuqala.